တစ်​ကယ်​​တော့ ဘယ်​သူမှ မနိုင်​ကြပါဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တစ်​ကယ်​​တော့ ဘယ်​သူမှ မနိုင်​ကြပါဘူး
တစ်​ကယ်​​တော့ ဘယ်​သူမှ မနိုင်​ကြပါဘူး
Posted by naywoon ni on Mar 12, 2015 in Creative Writing, Drama, Essays.., My Dear Diary | 34 comments
လတ်​​တစ်​​လော ​ဖေ့စ်​ဘုတ်​မှာ ​လူတိုင်းလိုလို တင်​နေကြတဲ့ ပို့စ်​က ” ​ကျောင်းသား​တွေ နိုင်​တယ်​ ” တဲ့ ။ ( တစ်​ဖက်​က လည်း ​ကျောင်းသား​တွေကို သူပုန်​လိုလို ​ပြော​နေကြတာ​တွေလည်း ရှိသ​ပေါ့ ။ ဒါ​ပေမဲ့ ​နေ၀န်းနီ က အ​ကောင့်​​တွေစပြီး အက်​ကတည်းက / လက်​ခံကတည်းက ​သေချာစ်ီစစ်​ပြီးမှ လက်​ခံခဲ့ တာ​ကြောင့်​ ဆန့်​ကျင်​ဘက်​တင်​တဲ့ ပို့စ်​​တွေ အ​တွေ့ရနည်းပါတယ်​ ) ။ အခု လက်​ရှိ​ကျောင်းသား​တွေ မ​ပြောနဲ့ဦး ။ ရှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​ ​ကျောင်းသား​တွေ​တောင်​ အသည်းအသန်​ တိုက်​ပွဲဝင်​​နေကြရတုန်း ။လယ်​ဗယ်​ညီ ကွင်းမှာ နည်းစနစ်​မှန်​မှန်​ကန်​ကန်​နဲ့ စည်းကမ်းရှိရှိ ကစားရတဲ့ ပြိုင်​ပွဲမှ မဟုတ်​တာ ။ ဘယ်​လိုလုပ်​ နိုင်​ဦးမလဲ ။ ​ဘောလုံးပွဲ စကားနဲ့ ​ပြောရရင်​ ကွင်းလယ်​ဒိုင်​​ကော စည်းကြပ်​ဒိုင်​နှစ်​​ယောက်​ပါ တစ်​ဖက်​အသင်းဘက်​ပါ​နေတာ ။ ဆယ့်​​လေး​ယောက်​နဲ့ ဆယ့်​တစ်​​ယောက်​ ပွဲ ကြည့်​မ​ကောင်းတာ​တော့ အမှန်​ ။ သန်းငါးဆယ်​​သောပြည်​သူ​တွေက ပွဲကြည့်​ပရိဿတ်​ ။ တစ်​ချို့များ ပွဲကြည့်​ရင်း သန်းတုပ်​မပျက်​ ။ အတင်း​ပြောမပျက်​ ။ အဟုတ်​ ။
​နေ၀န်းနီ သိသ​လောက်​က​တော့ အခု ​ကျောင်းသား သပိတ်​မှာ အားလုံးက လက်​မခံပါဘူး ။ အပြင်းအထန်​ ကန့်​ကွက်​သူ​တွေက စားပါးဝ​နေတဲ့ ပညာ​ရေး ၀န်​ထမ်း​တွေများပါတယ်​ ။ အပြင်​ကျူရှင်​​တွေနဲ့ ​ဘော်​ဒါ ​ဆောင်​​တွေကလည်း တစ်​သ​ဘောထဲပဲ ။ ပြင်​ဆင်​မဲ့ ဥပ​ဒေ သာအတည်​ဖြစ်​ခဲ့ရင်​ သူတို့ ဖွင့်​ထားတဲ့ ကျူရှင်​​လေး​တွေ ​ဘော်​ဒါ​ဆောင်​​တွေက အ​ဟောသိကံ ဖြစ်​ရ​တော့မှာပါ ။ သူတို့အ​နေနဲ့ လက်​ရှိက​နေ လက်​မဲ့ အဖြစ်​မခံနိုင်​ပါဘူး ။ ​ကျောင်းခန်းထဲမှာ တတ်​​အောင်​သင်​ ဆရာနဲ့ တပြည့်​ အပြန်​အလှန်​ အမှတ်​​ပေး ဆို​တော့ စန်းစန်းတင့်​ဖြစ်​ကြသ​ပေါ့ ။ ဟုတ်​တယ်​​လေ ။ တစ်​သက်​လုံး ပြန်​မ​ပြောရဲခဲ့တဲ့ တပြည့်​​တွေက သူတို့ရဲ့ အသက်​​မွေးဝမ်း​ကျောင်း အလုပ်​ကိုပါ ထိခိုက်​လာမဲ့ အပြန်​အလှန်​ အကဲဖြတ်​ အမှတ်​​ပေးခံရမယ်​ ဆို​တော့ ……
ပြီး​တော့ အစိုးရ လစာစား​နေတဲ့ (ပြည်​သူ့ အခွန်​ထဲကလစာထုတ်​​နေ​ရ​ပေမဲ့ တစ်​သက်​လုံး အစိုးရ လခစားလို့  သမုတ်​လာတာ နှုတ်​ကျိုး​နေပြီ ပြင်​မရ​သေးဘူး ) အစိုးရ အာဏာ တည်​မြဲ​ရေး ​ပေါ်လစီနဲ့ မိ​နေတဲ့သူ​တွေကလည်း သူတို့နဲ့ နီးစပ်​​နေတဲ့ သူ​တွေကလည်း ကန့်​ကွက်​တာပဲ ။ သူတို့နားမှာ အစိုးရ ​ကောင်း​ကြောင်း​တွေပဲ ကြား​နေရတာဆို​တော့ ပိတ်​ထားတဲ့ နားက အစိုးရမ​ကောင်း​ကြောင်း​ပြောရင်​ လက်​မခံချင်​ဘူး ။ ​ကျောင်းသား သပိတ်​လည်း ဖြိုခွင်းတယ်​ ဆို​ရော လက်​ခုပ်​ထတီးကြ​ရောပဲ ။
ဒါဖြင့်​ ဘယ်​သူ​တွေက လက်​ခံလဲ ဆို​တော့ သိတဲ့အတိုင်း အစဉ်​အလာ ပညာ​ရေး စနစ်​ကို ဆန့်​ကျင်​တဲ့သူ ။ တိုးတက်​သည်​ဖြစ်​​စေ ဆုတ်​ယုတ်​သည်​ဖြစ်​​စေ လက်​ရှိ စနစ်​ကိုငြီး​ငွေ့​နေလို့ အ​ပြောင်းအလဲ ကို လိုလားတဲ့ သူ​တွေ ( ဒီ​နေရာမှာ ဘွဲ့လက်​မှတ်​ကိုင်​ထားပြီး အလုပ်​လည်​စပ်​​နေရတဲ့ သူ​တွေ လည်းပါတာ​ပေါ့ ) ။ တစ်​ချို့က​တော့ နိုင်​ငံတစ်​ကာ က ပညာ​ရေးစနစ်​​တွေကို လက်​​တွေ့ကျကျ ​လေ့လာဖူးပြီး ဒီ​နေရာမှာ​ပြောင်းလဲသင့်​ပြီလို့ မှတ်​ချက်​ချ တဲ့သူ​တွေ ။
ဆို​တော့ကာ ဒီပညာ​ရေး ဥပ​ဒေ ပြုပြင်​​ပြောင်းလဲဖို့ ရှစ်​ဆယ့်​ရှစ်​လို လှည်း​နေ​လှေ​အောင်း မြင်း​ဇောင်းမကျန်​ မစည်းရုံးနိုင်​​သေးဘူး ။ ​နောက်​တစ်​ချက်​က အာရုံ​ပြောင်းလှည့်​ကွက်​​တွေများ​နေတဲ့ အချိန်​မှာ သပိတ်​​မှောက်​လိုက်​တာက တစ်​ချက်​ ။ လက်​ရှိ​ကျောင်း​တွေ အတန်းတင်​စာ​မေးပွဲ​တွေနဲ့ အချိန်​တိုက်​​နေတာက တစ်​ချက်​ ။ ဖြိုခွင်းခံရတဲ့ အချိန်​မှာ ဦးစီး ဦး​ဆောင်​လုပ်​တဲ့ ​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေ ​ပျောက်​​နေတာက တစ်​ချက်​ ။ ဒါ​တွေ​ကြောင့်​ ​ကျောင်းသား​တွေ နိုင်​တယ်​လို့ ​ပြောလို့မရ​သေးဘူး ။
ဒါဖြင့်​ တစ်​ဘက်​က​ကော ။ သူလည်းရှုံးတာပါပဲ ။ သူ့အရှုံး ကအများသိပြီးသားမို့ အကျယ်​မ​ပြော​တော့ပါဘူး ။ ​နောက်​ဆုံး​တော့ နှစ်​ဖက်​စလုံး lose: lose ဂိုးမရှိသ​ရေကျသွားပါတယ်​ ။ ​နောက်​မ​ကျေပွဲ က​တော့ ​စောင့်​ကြည့်​ရဦးမှာ​ပေါ့​လေ ။
မှန်​တာ​ပြောရရင်​ ဒီပွဲက လယ်​ဗယ်​ညီ ကွင်းမှာ မပြိုင်​ရဘူး ။ ​ကျောင်းသား​တွေဘက်​မှာ နည်းပြက အနီးကပ်​ မကွပ်​ကဲနိုင်​ဘူး ။ ဘက်​မလိုက်​တဲ့ ဒိုင်​လူကြီးမရှိဘူး ။ ​နောက်​တစ်​ပွဲများ နွှဲ မယ်​ဆိုရင်​ ကြိုတင်​ပြင်​ဆင်​ဖို့ပါ ။
ဒီ အစိုးရ လက်ထက်
ဘာမှလည်း ပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုမနေနဲ့တော့။
သက်သာရာသက်သာကြောင်း အွန်လိုင်း လောဘီ နဲ့ ဘောမနိုင်ရင် နိုင်ဂျံဂါး က လူ ဆို ၇ သိန်းပေါက် တယ်။
ပြည်တွင်းက ဆို ၃ သိန်းတဲ့ ၊ ကွန်ပြူတာပါပေးတယ် ဆိုပဲ။
အရေးအခင်း နှိမ်နင်းဖို့ ဝတ်စုံနဲ့ နေ့စား ၃၀၀၀ တဲ့။ (နောက်ဆုံး လက်ပံတန်း ပေါက်ဈေးနော်)
လက်ပတ်နီ နဲ့ မျက်နှာပြရဲ ရင်တော့ တစ်နေ့ ၁၀၀၀၀ ပေါက်သတဲ့။
ဘယ်က သိလည်းတော့ မမေးနဲ့။
ကျောင်းသားကို ကြောက်ပြီး လူမိုက်တွေ ကာကွယ်ခံရတဲ့ ခေတ်!!
​ပြောဖို့တစ်​ခု​ကျန်​သွားတယ်​ ။ မ​သေချာလို့ ထည့်​မ​ပေးလိုက်​တာ ။ အခု ​ကျောင်းသား​တွေဖက်​က ​နောက်​မဆုတ်​ဖို့ အား​ပေး​နေတဲ့ အထဲမှာ ကြံ့ဖွတ်​​တွေလည်းပါဆိုပဲ ။ သူတို့ အ​မြှောက်​​ကောင်း အ​ညှောင့်​​ထောင်​​ပေး​နေသတဲ့ ။ ဒီဇာတ်​လမ်းမှာ ပြီးခဲ့ တဲ့ ဖြိုခွင်းမှု အထိ ဇာတ်​ညွှန်းဆွဲပြီးသား ရှိသတဲ့ ။ ​နောက်​ကွယ်​က ကြိုးကိုင်​သူ​တွေထဲမှာ သူတို့လည်း အလံ ရှူး အ​နေနဲ့ ပါ​နေသတဲ့ ။ ဘယ်​​လောက်​ထိ မှန်​သလဲ​တော့ အတိအကျမသိ ။
ပြည်ထိုင်ခိုး သူတို့ ကတော့ ဘယ်တုန်းကမှ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တွေ ဆိုတော့ ထည့်မပြောတာပဲ ကောင်းပါတယ်။
ဦးနီရေ ဖတ်သွားတယ်ဗျို့ …. လာမယ့် ပွဲ မကြမ်းပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းနေတယ်… ပြည်သူ့ မဲက ကျောင်းသားတွေ ဖက် ပါ နေပီ…. ဒီလို အချိန်မှာ ၁၁ ချက်ကို ပြန်ဖိ တောင်း စေချင်တယ်… အဲ့လိုမှ မဟုတ်ပဲ အစိုးရ အလိုမရှိ ဆိုလို့ ကတော့…. သရေပွဲ ထပ်မြင်ရဖို့ များတယ်….
ဘယ်သူ့ မှ မနိုင်ဘူးဆိုတော့ တစ်သင်း တစ်မှတ်စီ ခွဲယူသွားတယ်ပေါ့…။
အစိုးရ တစ်မှတ်…၊ ကျောင်းသား တစ်မှတ်…။
ဈေးက အစိုးရက သရေအရှုံးဖွင့်ထားတာဆိုတော့
ကျောင်းသားတွေ လောင်းကြေး နိုင်သွားတာပေါ့…။
ကြေးက သရေ အရှုံး ဆိုရင်ကော…
မဲလုပွဲ မျိုး များဖြစ်လေမလားးမြင်မိတယ်။
ဒါတွေအပေါ်မှာ ကြံ့ဖွံ့ က အသုံချလိုက်ဖို့ ကြိုးစား
NLD 2015 ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ရင်
.အလို ဆြာသမား ပြန်လာပြီ။ ရွာထဲမှာ မြဲအောင် ဘယ်လို ကြိုးတွေနဲ့ တုပ်ထားရင် ကောင်းမလဲ။
အားတဲ့အချိန် ကွန်နရှင်မရ ။ အချိန်မပေးနိုင်။
လော့အင် ဝင်ဖို့ကြိုးစားတာ ဒီတပုဒ်မှ အဆင်ပြေ
ကလေးတွေ အရိုက်ခံရတာမြင်တာတော့ စိတ်မကောင်းဘူး
“ကျောင်းသားတွေနိုင်တယ်” လို့.. အတည့်ပြောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
ဗီဒီယိုတွေသေသေချာချာလိုက်ကြည့်နေတာ.. နိုင်ငံတကာနဲ့ယှဉ်ရင်.. မြန်မာရဲတွေ ဒီလောက်လွန်နေတာတော့.. မတွေ့ရ..။
ပုံတွေအရ.. လူတယောက်ကို.. ယောကျာ်းကြီးတွေက.. အဲလောက်ဝိုင်းရိုက်ရင်..ကျိုးကြေပြီး.. သေကိုသေပါတယ်..။
မသေတာဟာ.. မရိုက်ပဲရွယ်ထားတာတွေရှိတယ်.. ဒါမှမဟုတ်.. ချက်ကောင်းမရိုက်ပဲရှိတယ်.. ဒါမှမဟုတ်.. သူတို့ရိုက်တဲ့ဒုတ်က.. အပျော့ဖြစ်လို့.. တခုခုပါပဲ..။
ယူအက်စ်မှာ.. ရဲနဲ့ထိပ်တိုက်ထိတွေ့ရင်.. လုံးဝခုခံခြင်းမရှိရ..။ ကြွက်သားတွေကိုတောင်.. မတင်းထားရပါ..။ တင်းထားပြီး…ရုန်းကန်ရင်.. . ရဲကဥပဒေအရ.. အသာရသွားပြီး. ရိုက်နှက်သတ်ပစ်ခွင့်.. လုပ်ပိုင်ခွင့်ရသွားလို့ပါ..။
အသက်တချောင်းမှမရင်းရပဲ.. ဒီလောက်ကမ္ဘာ့သတိထားမှုရတာမို့.. မြန်မာ့မီဒီယာတွေကို ချီးကျုးရမယ်လို့.. ထင်..
ကျောင်းသားတွေ.. အသားနာကျင်စတေးရတာ.. ပြန်ရတာထက်စာရင်..တန်တယ်ပေါ့…။
ပြန်ရတာက.. မြန်မာအစိုးရ.. တိုင်းဒေသကြီးတွေ.. ကိုင်တွယ်မတတ်(အစိုးရမလုပ်တတ်)တာ… ပေါ်ကုန်သပေါ့..။
နောက်ဆက်တွဲ.. ရန်ကုန်မှာဆန္ဒပြကြတာမှာ. ကျောင်းသားလို့ထင်ရသူတချို့.. သံဒုတ်နဲ့.. အန်နာချီဆိုင်း.. ကိုင်ထွက်တာတွေ့ရတယ်.။
လုံးဝ..လုံးဝမလုပ်သင့်ကြောင်းနဲ့.. ရှေ့က..လက်ပံတန်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့..ရင်းခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့.. အနိုင်ရထားတဲ့အမြတ်နဲ့.. အရင်းအကုန်ပြန်ပေးလိုက်ရမယ့်.. အဖြစ်လို့ထင်…။
အဲဒီအပေါ်ပုံက.. လူမည်းကြီး.. ရဲကနောက်ကလယ်ပင်းချုပ်ထားတာ.. ခဏနေတော့ သေသွားပါတယ်..။
နယူးယောက်မှာလွန်ခဲ့တဲ့ ၃လကဖြစ်တာ..။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ပါတ်လောက်ကလည်း အယ်လ်အေမှာ တင် ရဲနဲ့လုံးထွေးတာမှာ.. အ်ိမ်ချေမဲ့တယောက် သူ့သေနတ်လုပါတယ်ဆိုပြီး. ရဲက ထပစ်ထည့်တာ သေပါရောလား..။
နောက်မှပြောလဲ ရပါတယ် တဂျီးးးရယ်
ဒါကျမှ အိမ်သာနေချင်နယ် မှီအောင် ရဲတွေကပါ အသေပစ်နေမှဖြင့်…!!
အမှန်တော့ ဒီပွဲမှာ ကျနော် နိုင်တယ်
တစ်ဖက်ဖက်ကနေပြီး နိုင်တယ် ရှုံးတယ် မပြောတော့တဲ့အခါ
ခေါင်းမကွဲ အရိုးမကျိုးပေမယ့် ထိထိရောက်ရောက်
သူကြီးက ဒီနံဘတ်တုတ်တွေကို အထင်သေးနေတာလားမသိ
ကျနော် Brunei Embassy မှာ Security ဝန်ထမ်း လုပ်တုန်းက
ဘယ်သူ့မှ မရိုက်ခင် ကိုယ့်ခေါင်းကို ကိုယ် ခပ်စပ်စပ်လေး ရိုက်ကြည့်ဖူးတယ်
ဖုမထွက် သွေးမထွက်ပေမယ့် အတော် နာသဗျ
ဒါတောင် ခပ်ပြင်းပြင်း မရိုက်သေးဘူး
လက်ဘဒန်း အရေးအခင်းမှာ ရဲတွေက ကျောင်းသားတွေကို ပြေးပြေး ခုန်ခုန်ပြီး အားနဲ့ လွှဲရိုက်ပုံမျိုးနဲ့ဆိုရင်တော့လားးး
ဓာတ်ပုံတချို့ထဲ.. အဲဒီတုတ်တွေက.. ကွေးညွတ်နေသမို့.. အီးယူက.. မြန်မာရဲတွေအတွက် ..စပယ်ရှယ်တုတ်များပေးထားသလားထင်မိတာပါ…
တချို့တုတ်က ရာဘာသီးသန့်လိုလိုကို အဲ့လိုေ
ကွေးသွားတယ်။ ရိုက်လိုက်ရင် ပိုကွေးသွားတယ်။
ထိလိုက်တာနဲ့ ထန်ခနဲ ပြန် ကန်ထွက်တတ်တယ်။
မနာပါဘူးလို့ မထင်လေနဲ့ သူကြီးရေ
တုတ် အကျိုးအပျက်ဖြစ်သွားတာကိုလည်း ကိုင်ကြည့်ဖူးတယ်။
တချို့က စတီးတွေ သံတွေ အထဲမှာ ပါတယ်လို့ပြောပေမယ့် ကျနော်တို့ သံရုံးအတွက် ရထားတဲ့ ရာဘာတုတ်အထဲမှာတော့ သစ်သားချောင်းပါပဲ။
သစ်သားချောင်းက လုံးပတ် ခပ်သေးသေးပဲ။
အဲ့သစ်သားချောင်းအပေါ်က ပတ်ထားတဲ့ ရာဘာခေါ်မလား မည်းမည်းကြီးက ထူတယ်။
အဲ့ဒါကြီးတွေက ပျော့တယ်ထင်ရပေမယ့် အရိုက်ခံရသူဟာ ဆွေမျိုး(မူးပြီး)မေ့သွားလောက်အောင် နာပါလိမ့်မယ်။
နောက်စေ့များ ခပ်ပြင်းပြင်း ဆော်ထည့်လိုက်ရင် ဒဏ်ရာမပေါ် သွေးမထွက် သံမယိုပဲ သေလိမ့်မယ်လို့တောင် ထင်မိပါကြောင်း
ကျောင်းသား တွေ ကို သနားလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး အော်နေတဲ့ သူများထဲ မှာ
ကျောင်းသား ရဲ့ သွေးမြေကျ တဲ့ ပုံတွေ ကို မြင်ချင်သူ တွေ ရှိနေတယ် လို့ စွပ်စွဲ မယ်။
အဲဒီ ပုံ တွေ ကို ပြပြီး သူတို့ ကိုယ်ကျိုး အတွက် သုံးဖို့။
တစ်ချို့များ ပြစရာ မရှိတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ ခမောက်ကလေး တွေ ပြပြီး လွမ်းအောင်ရေးကြတယ်။
ကလေး တွေ ကို ပက်ပက်စက်စက် ဒုက္ခရောက်ပြီး အသက်ပေး သွား စေချင်တဲ့ အယုတ်တမာကောင်တွေ။
(နှစ်ဖက်လုံး ကို ပြောတာ)
# တကယ်တော့ သူတို့ နှစ်ဖက်လုံး ရှုံးတယ်။
# မျက်နှာဖုံး တွေ ကွာကုန် လို့။
လိုရင်း ကို ပြန်ပြောရ ရင် အဘ နီရေ။
ကျွန်မ ဖွဘုတ်ထဲ ဒီ သတင်း တွေ တင်နေသူ လက်ချိုး ရေလို့ ရ အောင်နည်း တယ်။
အရင်ရက် က ၃ / ၄ ယောက် လောက် ရှိတယ်။
အခုတော့ အမှောင်ခွင်း သူ တစ်ယောက် နဲ့ ကျောင်းသားနိုင်တယ် တင်သူ တစ်ယောက် နှစ်ယောက် ဘဲ ရှိတယ်။
အစိုးရ ဖက်က သတင်း ပင်းပြီး တင်သူ တစ်ယောက် ရှိတယ်။ (ကျွန်မ ယောက်ဖ)
ကျန် ရာချီ ပြီး ရှိသူများ ဒါတွေ နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘာကိုမှလဲ မလိုက်၊ ဘာကို မှလဲ မမျှ။
အသွားမပျက်၊ အစားမပျက်၊ အလည်မပျက်၊ ကွန်ဖရန့်တွေ မပျက်။
သူတို့ချည်းဘဲ သူငယ်ချင်းလုပ်ထားမိရင် ရွှေပြည်ကြီး မှာ အင်မတန်အေးချမ်းပြီး တိုးတက်တယ် ထင်ရတော့မှာ။
ပြသနာ တွေ ဖြစ်နေတယ် တောင် ထင်မှာ မဟုတ်ဘူး။
သူ့ပြည်သူ တွေ အကြောင်း ကို ရိပ်မိလိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် က
“အချိုသပ် ပေါင်းဖို့ ကလွဲ လို့ တစ်ခြားနည်း နည်း” မရှိတာ သိလိုက်တာ ကို က ပညာကြီး တာဘဲ။
ကျောင်းသား သပိတ်ကို လက်မခံတဲ့သူထဲ
အရီးး ရဲ့ စိတ်သဘောထားး ကပဲ ရှင်းလင်း ဖြောင့်မှန်တယ် လို့ ထင်တယ် ဗျ..!!
ကျန်တာတွေကတော့ အများစု ကတော့….
ကျောင်းးသားးတွေ အတွက်လည်းး မဟုတ်
ကြီးးမေ အတွက် လည်းး မဟုတ်
အချိန်အခါ အတွက် လည်းးမဟုတ်ပဲ
ပြောင်ကြီးး ခေါင်းခဲ မှာ စိုးးတဲ့ လမ်းးစဉ်ထဲကနေ
အသံကောင်းး ဟစ်နေတယ် လို့ ပဲ ယူဆတယ်…
သက်သေ မရှိပဲ ပြောတာ မဟုတ်ဘူးးနော့…!!
မြို့​မေတ္တာ ခံယူတဲ့ ပွဲလို့ သတ်​မှတ်​ပါတယ်​
ဆို​ဒေါ့ နိုင်​ပါတယ်​ ဗျာ
မာမွတ်ခိုမ် ပြောတဲ့ The end justifies the result အရဒေါ့ စစ်တပ်ပဲ အစဉ်အဆက် နိုင်နေတာပဲ..။ ပွဲကို စီးရီးဆွဲလိုက် လက်နက်ရှိသူ အာဏာရှင်နိုင်တာ ထားတော့။ တပွဲခြင်းအလိုက် ရှုံးတာ သုံးသပ်လျင်တော့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပြည်သူများ နှစ်နှစ်ကာကာ မယုံကြည် တန်ဖိုးမထားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ တန်ဖိုးမထားတော့ ကိုယ့်ခလေး ပညာရေးနဲ့ မလဲနိုင်၊ ကိ်ုယ်စည်းစိမ်ဥစ္စာထိမှာ ကြောက်ရွံ့၊ အလုပ်ထိပါးမှာ စိုးရိမ်… ဖြစ်လျင် ကိုယ်ပဲခံရမှာ.. တကယ်ကောင်းစားမှာ ငါတို့ မဟုတ်ဆိုတဲ့ အတွေးက လူအတော်များများမှာ အရိုးစွဲနေပြီ။ ဒါကို ကောင်းကောင်းသိတဲ့ စစ်တပ်က ဖြစ်လာတိုင်း အဲဒီခြောက်လုံးတွေနဲ့ပဲ ဝါဒဖြန့်တယ်။ ကျောင်းသားမို့ မအားပေးထင်သလား.. မပူနဲ့ ဒေါ်စုလုပ်လည်း ဒီလိုပဲ ပြောလိမ့်ဦးမှာ.. နည်းသွားတာပဲ ရှိမည်။ နည်းသွားလို့ တကယ်လုပ်ကြဟေ့ဆိုတော့ ကျောင်းသားတုံးက ကန့်ကွက်သူတွေ ဓဂေါင်မှ ထွက်လာမည် မဟုတ်၊ မဲပေးတာတောင် လေသံမာမာနဲ့ ခြောက်လျင် အမေမှ အမေအော်နေသူတွေ မဲရုံကို မသွားတော့၊ ပိုခြောက်လိုက်လျင် ကြိုတင်မဲတွေ ကြံ့ဖွတ်ကို ပေးအုံးမည်။ သင်ခန်းစာက ရဲရဲလုပ်.. လက်ဦးမှု အရယူ.. အရေးသာမှ အများစု လိုက်လာမည်။ နို့မို့လို့ကတော့ ကိုယ့်ထက် လည်သူချည်းပဲ.. မမျှော်နဲ့။
တစ်ကယ် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး ခေါင်းဆောင်မယ့် ဦးကြောင်ကိုမျှော်မိပါတယ်
အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်(တွေ)တိုင်း.. အ၀ါအဖွဲ့အစည်းက.. အုပ်ချုပ်သူဘုရင်.. ဒါမှမဟုတ်..စစ်အာဏာရှင်..ဒါမှမဟုတ်.. အစိုးရနဲ့..ဟန်ချက်ညီညီကစားသွားတတ်တာကို.. သမိုင်းအဆက်ဆက်ပြနေလျှက်နဲ့.. ကိုရင်ကြောင်မျက်ကွယ်ပြုတာတော့ အံ့သြစရာ…။
မြန်မာပြည်ရဲ့.. တကယ့်ကျိန်စာဟာ.. အဲဒါပဲ..။ ရှေးဥရောပရဲ့.. churchနဲ့..king အတွဲညီညီကစား.. လူထုကို ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်တာနဲ့သဘောတူတူပဲ..။
အမေရိကားပြည်ထောင်စုအဖြစ်ထောင်တော့.. အခြေခံဥပဒေမှာ.. အရင်ဆုံးပြင်ရတဲ့.. အမဲမန့်က..အဲဒါပဲ..။
“Separation of church and state” (sometimes “wall of separation between church and state”) isaphrase used by Thomas Jefferson and others expressing an understanding of the intent and function of the Establishment Clause and Free Exercise Clause of the First Amendment to the Constitution of the United States. The phrase has since been repeatedly used by the Supreme Court of the United States
ဒါကို.. တော်လှန်ဖို့ဝေလာဝေးး မသိသမျှ.. မသိချင်ယောင်ဆောင်(နေ)သမျှ… ကျိန်စာဘယ်တော့မှမလွတ်…။
2007 Saffron Revolution တုံးကလည်း.. ကြခက်ဝိုင်းဆရာတော် (မဟန)က.. တုတ်နဲ့ရိုက်..၊ ဓားနဲ့ခုတ်ဆိုတဲ့.. မီးစိမ်းပြ.. အသံသွင်းဖိုင်လေး ကြားဖူးပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒါမျိုး..။
ကျောင်းသားများ ရန်ကုန်မ၀င်ရန် သံဃဂိုဏ်းပေါင်းစုံမေတ္တာရပ်ခံ
သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ ရန်ကုန်ကိုဝင်ရောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွေ မလုပ်ဖို့နဲ့ ပါဝင်ဆန္ဒပြနေတဲ့ သံဃာတော်တွေအနေနဲ့လည်း ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆက်လက် မပူးပေါင်းဖို့ ရန်ကုန်တိုင်း သံဃနာယကအဖွဲ့ (ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ) က မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ရွှေကျင်၊ ဝေဠုဝန်၊ ငှက်တွင်း စတဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ သံဃဂိုဏ်းတွေက ဆရာတော်ကြီး ၇ ပါးက လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး မတ်လ ၃ ရက် နေ့စွဲနဲ့ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန် မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တာ တာပါ။
လက်ပံတန်းကနေ ရန်ကုန်ကို ဦးတည်ချီတက်ဝင်ရောက်ဖို့ ပြင်နေတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ဖြစ်စေလိုတဲ့ အခြေအနေတွေကို ငြိမ်းချမ်းအောင်မြင်မှု အပြည့်အ၀ရရှိစေဖို့၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေမယ့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အေးချမ်းစွာ စာမေးပွဲဖြေနိုင်ဖို့နဲ့ ပြည်သူတွေအကြား စိုးရိမ်သောကတွေမရှိစေဖို့ ရန်ကုန်ကိုဝင်ရာက်ဖို့ မကြိုးပမ်းဘဲ မိဘရင်ခွင် ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခိုလှုံကာ ပေါ်ထွက်လာမယ့် ရလဒ်ကောင်းတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
ဒါ့ပြင် အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းအား လွှတ်တော်မှာ ဆွေးနွေး အတည်ပြုဖို့ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာအောင် စတင်လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို အသိအမှတ်ပြုတယ်လို့လည်း ဆရာတော်တွေရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်ကို ရန်ကုန်တိုင်း သံဃနာယကအဖွဲ့က သံဃာတော်တွေက သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားတွေရှိရာ လက်ပံတန်းမှာ ကြွရောက်ဖတ်ကြားပြခဲ့တယ်လို့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ကိုရဲရင့်ကျော်ကပြောပါတယ်။
“ဆရာတော်တွေကို ပြန်ပြီး လျှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော်တွေက အိမ်ပြန်ဖို့ ပြောတဲ့ မေတ္တာ စေတနာကို နားလည်ပါတယ်လို့၊ တပည့်တော်တို့ အနေနဲ့ကလည်း အိမ်ပြန်ဖို့ဟာ စီစဉ်ပြီးသားပါ။ သို့ပေမယ့် တပည့်တော်တို့ အိမ်ပြန်ဖို့အတွက် အချက် ၈ ချက်ပါတဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို နယ်လုံဝန်ကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးတာ တပည့်တော်တို့ ပြန်မယ့်ဟာကို သဘောမတူဘဲနဲ့ ခုလို ပိတ်ဆို့ ကာဆီးထားတဲ့အကြောင်း လျောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဒီစာကို လာဖတ်ပြတဲ့ ဘုန်းဘုန်းတို့က အဲဒီအကြောင်း အရာကို သူတို့ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ သံဃာတော်တွေ မိဘပြည်သူတွေ ပူပန်နေတဲ့ စာမေးပွဲရက်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်အောင်ရယ်၊ ညီငယ် ညီမငယ်တွေ စာပေးပွဲကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် ဖြေနိုင်အောင်ရယ်၊ စာမေးပွဲ ရက်မရောက်ခင် ပြန်ရောက်ဖို့ ရက်တိုအတွင်း စီစဉ်ထားတာပါဘုရားလို့၊ ကားစီးပြီး ရန်ကုန်ကို သွားမယ့်ကိစ္စမှာ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ ခုလို ပိတ်ပင်မှုတွေလုပ်ထားတဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာ သောင်တင်နေရပါ တယ်ဆိုတာကို လျောက်လိုက်တယ်။”
အလားတူ လက်ပံတန်းမှာ ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူပူးပေါင်းဆန္ဒပြနေတဲ့ ရဟန်းသာမဏေ တွေအနေနဲ့လည်း သီတင်းသုံးရာ ကျောင်းများသို့ ပြန်လည်ကြွရောက်ပြီး သာသနာ့တာဝန်များကို သာထမ်းဆောင်ပေးတော်မူကြဖို့လည်း ရန်ကုန်တိုင်း သံဃနာယကအဖွဲ့ (ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ)က သီးခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန် ပန်ကြားထားပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းကို ၀န်းရံပေးတဲ့အနေနဲ့ လက်ပံတန်းမှာ ပူးပေါင်းဆန္ဒပြနေတဲ့ သံဃာတော် တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ ဦးဥတ္တမက “ဆရာတော်တွေရဲ့ သဘောတရားကိုတော့ လက်ခံပါတယ်။ ဦးဇင်းတို့ကတော့ ကလေးတွေကို ပစ်ထားပြီး သွားလို့မရပါဘူး။ သူတို့သေရင်လည်း လိုက်သေ၊ သူတို့ရှင်ရင်လည်းလိုက်ရှင်ပေါ့။ သူတို့ကို ဖမ်းရင်လည်း လိုက်အဖမ်းခံပေါ့။ အဆုံးစွန်ထိ လိုက်လုပ်ပေးရမှာပါဘဲ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ပူးပေါင်းသွားမှာပါ၊ ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက် ကလေးတွေနဲ့ အတူသွားမှာပဲ။ ကလေးတွေ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့၊ ကလေးတွေရည်မှန်းချက် ပြည့်ဖို့ လိုက်လံ ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ပေးရမယ့် ၀တ္တရားရှိတယ်၊ သို့သော်မေတ္တာ ရပ်ခံစာ တဖက်သတ်ထုတ်တာကတော့ မသင့်တော်ဘူးပေါ့။ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ ဆရာတော် တွေအနေနဲ့ ဒီဘက်ကို မေတ္တာရပ်ခံသလို ဟိုဘက်က ပိတ်ပင်တားဆီးပြီးတော့ တုတ်ဓားတွေနဲ့ လက်နက် တွေအပြည့်အစုံနဲ့ မီးသတ်ကားတွေနဲ့ လုပ်နေတဲ့ ပုဂိုလ်တွေကိုတော့ မေတ္တာရပ်ခံချက်လေး တခုတလေလောက် လုပ်ပေးသင့်တယ်’ လို့ မိန့်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်း သံဃဂိုဏ်းပေါင်းစုံရဲ့ ကြေညာချက်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့် ကျောင်းသားတွေ အေးချမ်းစွာစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရေး၊၊ သံဃာတော်များအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှု မရှိစေရေးနဲ့ ပြည်သူများအကြား စိုးရိမ်သောကများမရှိစေရေးအတွက် ကျောင်းသားများနှင့် ဆက်လက် မပူးပေါင်းဖို့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။
အဘနီရေ။ နောက်ထပ် မကြေပွဲဆိုတာကို ကျွန်တော့အနေနဲ့ မလိုလားပါဘူး။ အားလုံးကို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ပဲ ပြီးဆုံးစေချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေဘက်က နည်းပြအဖွဲ့ထဲမှာရော အသင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့သူ တွေချည်ပဲလား။ ကျွန်တော့အမြင်တော့ နည်းပြတွေထဲမှာ ကိုယ့်အသင်းနိုင်ဖို့ထက် တစ်ဖက်အသင်းကို လက်စားခြေလိုတဲ့ သူတွေ နည်းနည်းပိုများနေသလားလို့။
ပြီးတော့ ဒီပွဲရဲ့ အဖြေက lose:lose ဆိုတာထက် draw result လို့ပဲမြင်ပါတယ်။ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက်သာ ကစားကျပြီး ကစားကွက်မကောင်းလို့ သရေကျသွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။
ကိုကာရစ်​ ​ပြောသလို Draw result ဆိုတာ ​ဘောလုံး စကားနဲ့ ​ပြောရရင်​ 1:1 ဒါမှ မဟုတ်​ 2:2 ​ပေါ့ဗျာ ။ ပွဲပြီးရင်​ ၂ဖက်​ ကစားဖက်​ချင်းလည်​ပင်းဖက်​သွားကြတာဗျ ။ အခုဟာက အဲ့သလို မဟုတ်​ဘူး ။ ရိုက်​နှိက်​ ဖမ်းဆီးနှိပ်​စက်​ခံထားရတာ​ကြောင့်​ အမုန်းတရား​တွေ ပွားကုန်​ပြီ ။ အဲ့ အမုန်းတရားကို ​ချေဖျက်​ဖို့ အချိန်​​တော်​​တော်​ယူရဦးမယ်​ ။ အမုန်းတရားဆိုတာက အရှုံးကိုဦးတည်​တာ ဒါ​ကြောင့်​ lose: lose လို့​ပြောတာ ။
အမုန်းနဲ့စခဲ့တဲ့ပွဲ အမုန်းနဲ့ အဆုံးသတ်သွားတာ မထူးဆန်းပေမယ့် စိတ်တော့ မကောင်းစရာပါ
လိုင်းက မ​ကောင်း ရတဲ့အထဲမူး​နေ​တော့
မီ မီ says:
ကျွန်မတို့ အခက်အခဲကိကျွန်မတို့ ဆရာဆရာမတွေအသိဆုံးပါ
အမေစီစဉ် ပလန်ချထားတာတွေ လွဲချော်ကုန်တယ်
နောက်ဆုံးတော့ နိုင်ငံခြားက ဒေါ်လာစားတွေလေထဲမြှောက်ပေးတာကို
သွေးနထင်ရောက်တဲ့ လူငယ်လေးတွေပဲ ခံလိုက်ရတယ်
လက်​ရှိပညာ​ရေး စနစ်​ကို မ​ပြောင်း​စေ့ချင်​တာက အပြင်​မှာကျူရှင်​​ပေး​နေတဲ့ ဆရာ ဆရာမ​တွေက လက်​မခံချင်​ဘူး ။ အဲ့ဒါ ကိုယ်​​တွေ့ ။ စကား​ပြော ရင်း ရန်​ဖြစ်​တဲ့ အထိ​ရောက်​လာလို့ ​နောက်​ဆုတ်​​ပေးခဲ့ရတယ်​ ။ တစ်​ချို့ ဆရာ / ဆရာမ​တွေက အတန်းထဲမှာ သင်​ရတာထက်​ ​ကျောင်းဆင်းမှ အပြင်​မှာသင်​ဖို့ ပဲစဉ်းစားတာ ။ အပြင်​မှာ ကျူရှင်​သင်​လို့ တစ်​လ သုံး​လေး သိန်းရတဲ့ သူ​တွေက​တော့ လက်​ရှိ စနစ်​ကို ဖက်​တွယ်​ထားမှာပဲ ။ အဲ့ အ​မေစု တို့ ​ဒေါ်လာ စား တို့ ဆိုတာက​တော့ ကျ​နော်​နဲ့ အလှမ်း​ဝေးလို့ သိပ်​နားမလည်​ဘူး ဗျ ( ကျ​နော်​ ဘယ်​ပါတီဝင်​မှမဟုတ်​လို့ပါ ။ ပုဂ္ဂိုလ်​စွဲ ဂုဏ်​ဂဏ စွဲလည်း မထားတတ်​လို့ပါ )
ပိုက်ဆံရလို့ မပြောင်းချင်တဲ့သူ ရာခိုင်နှုံးနဲပါလိမ့်မယ်
ရှင်တို့က စာတစ်လုံးလာမသင်ဖူးပဲ လေရိုက်နေကြတာပဲ
ဒီနေ့ချက်ခြင်း ပြောင်းလို့ရမလား အဆင်သင့်ဖြစ်မလားပြောပါ
အခုဖြစ်နေတာ အစိုးရဖက်က ဆွေးနွေးပါမယ် လက်ခံပါမယ် ရန်ကုန်မသွားပါနဲ့ဆိုတာကို
ကျောင်းသားတွေကို မြှောက်ပေးနေတဲ့ အချောင်သမား ကြောင်တောင်နှိုက်တွေက အကဲဆ်နေတာ မပြောတော့ဘူးလား
ကလေးတွေစာမေးပွဲရှိနေတာကို အခွင့်ရေးယူပြီး သောင်းကျန်းတာ လူယဉ်ကျေးတွေလား
ရှင်တို့က ရန်ကုန်လူထုကို အုံကြွဖို့ မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတာ ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေ
နိုင်ငံရေးလုပ်စားတဲ့ စားခွက်လုပွဲမှာ ကျွန်မတို့ ကျောင်းသားလူငယ်တွေ နှပ်ပစ်ခံရတာ အသဲနာလိုက်တာ
အဘနီပြောသလို ကျူရှင်သင်တာကိုပဲ အားသန်ပြီး မပြောင်းချင်ဆရာ/မတွေ ရှိနိုင်သလို
ခုခေတ်ကြီးထဲမှာ ဆရာ/မဂုဏ်နဲ့ပြည့်ဝချင်တဲ့ ပြည့်ဝအောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ဆရာ/မတွေလည်း ရှိနေတုန်းပဲမို့…..
လက်ရှိပညာရေးလောကမှာ ကျင်လည်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နားထောင်ချင်ပါတယ်။
အကြီးအကျယ် နောက်ပြန်ဆုတ်သွားသော မြန်မာနိုင်ငံ
“ကျောင်းသားတွေ နိုင်တယ်” ဟူသည် ယခုအခါ မြန်မာလူမှုရေးမီဒီယာများပေါ်တွင် အထင်ကရ ကြွေးကြော်သံတစ်ရပ် ဖြစ်လာသည်။ သို့သော် တကယ့်အရှိတရားသည် အနည်းငယ်ပို၍ ရှုပ်ထွေးနေသည်။ သရော်တော်တော်ပြောရပါက ပထမဆုံး အနိုင်ရရှိသူမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူ၏ ပါတီဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယခုနောက်ဆုံး နှိမ်နင်းခဲ့မှုက အတိတ်က စစ်တပ်၏ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများကို ပြန်သတိပေးလိုက်သကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် နှောင်းပိုင်းတွင် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ စစ်တပ်က ကျောထောက်နောက်ခံ ပြုပေးထားသော လက်ရှိ အာဏာရပါတီကို ဆန့်ကျင်ကာ မဲပေးကြမည့် အလားအလာများနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ယင်းက လူထုထောက်ခံမှု အခိုင်အမာရရှိထားနှင့်ပြီးဖြစ်သည့် NLD ကို အင်အားထပ်လောင်း မြင့်တက်သွားစေခဲ့သည်။
Foreignpolicy.com တွင် မတ် ၁၂ ရက်က ဖော်ပြခဲ့သော မင်းဇင်၏ Burma TakesaBig Step Backwards ဆောင်းပါးကို မူရင်းစာရေးသူ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာဘာသာသို့ ပြန်ဆိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဲ့ဒါ အမှန်​ပဲ သူကြီး​ရေ ​နောက်​က လိုက်​လာတဲ့ ​လောက်​ကိုင်​နဲ့ တရုပ်​ကြီး ကိစ္စရယ်​ ပြည်​သူတစ်​​ယောက်​ကို ​ကြွေးငါးသိန်း​လောက်​တင်​​နေပါတယ်​ ဆိုတဲ့ ဖွချက်​ရယ်​က လက်​ရှိ အာနာ ရပါတီ ကိုထည့်​မဲ့ မဲ​တွေထဲက ရာနှုန်း​တော်​​တော်​များ များ နှုတ်​ယူသွားလိမ့်​ဦးမယ်​ နဲ့တူရဲ့ ။